192 ဖြင့် အုန်းစားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » 192 ဖြင့် အုန်းစားခြင်း
192 ဖြင့် အုန်းစားခြင်း
Posted by မောင် ပေ on Jul 9, 2012 in Creative Writing, Think Different | 31 comments
“ ဟေ့ မင်းအခုရောက်နေတာ ဘယ်သူ့ အိမ်လဲ ဆိုတာကော မင်းသိရဲ့ လား ”
“ ကျုပ်အခုရောက်နေတာ ခင်ဗျား အိမ်လေ ၊ သိတာပေါ့ ”
“ အေး.. မင်းသိထားဖို့ က ၊ ငါ့အိမ်ကိုရောက်ရင် ငါမကြိုက်တာ မလုပ်ရဘူး ၊ ငါမကြားချင်တဲ့ စကား မပြောရဘူး ၊ ငါခွင့်မပြုဘဲ မင်းထင်သလို ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူး ၊ အဲဒါမင်းမှတ်ထား ”
“ အော်… ကျုပ်က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အိမ်ကို အလည်လာပါတယ် ၊ လက်စသတ်တော့ ထောင် ဖြစ်နေတာကိုး ”
“ ဘာကွ ၊ မင်း ဘယ်လို ပြောလိုက်တာလဲ ၊ ပြန်ပြောလိုက်စမ်းပါ ”
“ ကျုပ် အခု ခင်ဗျား အိမ်ကို လာလည်တယ်လေ ၊ ဒါခင်ဗျားရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ ခင်ဗျားရဲ့ အိမ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ် ၊ ကျုပ်လာတယ်ဆိုတာလဲ ခင်ဗျားအိမ်မှာ ကပ်နေဖို့ ၊ နေရာလုဖို့ လာတာမဟုတ်ပါဘူး ၊ အလည်လာတာကိုတောင် ခင်ဗျား လက်မခံတော့ဘူးလားဗျာ ”
“ လာလည်တာကို ငါလက်ခံတယ် ၊ ဒါပေမယ့် မင်းအခုနေနေတဲ့ ပုံကို ငါ လုံးဝမကြိုက်ဘူး ၊ မင်းပုံစံ ကြည့်ရတာ ငါ သောက်မြင်ကပ်နေတယ် ၊ မင်းအချိုးတွေကို ပြင်လိုက်စမ်းပါ ”
“ ဟောဗျာ… ကျုပ်ဟာကျုပ် ခင်ဗျား အိမ်ရဲ့ ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေတာရှိသေး ၊ ကျုပ်ကဘဲ ခင်ဗျား အမြင်ကပ် ရအောင် ကျုပ်ဘာများလုပ်မိလို့ လဲဗျာ ”
“ အေး.. ဘာမှ မလုပ်တာကို က ငါ့စိတ်ကို ဆွနေသလိုဘဲ ”
“ ကဲ.. ဒါဆို ၊ အခု ကျုပ် မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီ ဗျာ ၊ ကျေနပ်လား ”
“ အဲဒါမှ ပိုဆိုးလာတယ် ၊ ငါတော်တော်ခီးနေပြီနော ”
“ ဒါဆိုရင် ၊ ခင်ဗျား အိမ်ထဲမှာ ကျုပ် လမ်းလျှောက်နေမယ် ဆိုရင်ကော ”
“ ဟေ့ကောင်….သွားသွား.. မင်းတော်တော့ ၊ နောက်ကို ငါ့အိမ်ကို ဘယ်တော့မှ မလာခဲ့နဲ့ တော့ ”
“ ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီတဲ့ဗျာ ၊ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်.. ကျုပ်အခုလာခဲ့တယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အိမ်ကို လာလည်တဲ့အနေနဲ့ ရယ် ၊ ခင်ဗျားအိမ်က တံခါးအမြဲဖွင့်ထားတာရယ်နဲ့ ကြောင့်ရယ် မို့ ၊ ဝင်လာခဲ့မိတာပါ ၊ နောက်ကို မလာစေချင်ရင် ၊ တံခါးကို အမြဲပိတ်ထားလိုက်ဗျာ…နော ”
“ ဟာ…ဒီကောင်နှယ့်…ပြောလေကဲလေ….တောက် ”
အိမ်ရှင် တုတ်တစ်ချောင်းကောက်ကိုင်လိုက်သည် ။
ဧည့်သည် သည်လဲ ပြုံးရင်း ပြေးသွားပါတော့သည် ။
ဧည့်သည်ကအိမ်ရှေ့ပေါက်က ပြေးသွားတာလား၊ နောက်ဖေးပေါက်က ပြေးသွားတာလား
တုတ်နဲ့ လိုက်ပါပြီ ဆိုမှတော့
လွတ်မယ့်အပေါက်ကနေ ပြေးရတော့တာကလား ။
ဦးဦးဖျားဖျား ကွန်မင့် ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဘဲဗျို့ ။
အုန်း ဘဲ စားထားတာပါ
နိုရာလေးရဲ့ မေတ္တာတွေ ကြီးလွန်းပါဘိ
ကျန်တဲ့သူဆို အဲလို မေတ္တာမထားဘူး
ဧည့်သည်ဆို အိမ်ရှင်တွေက ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံကြတာလေ..
တချို့ဆို အရမ်းကိုအားနာဖို့ကောင်းအောင် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်တော့ …
ဒီလိုအိမ်မျိုးက ရှားတယ် ….အဲလိုအိမ်မျိုးမှ လည်ချင်တာ ..ဟိဟိ အပျင်းပြေမယ်ထင်လို့….
အုံးစားတာ တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုလိုပဲနော်
တိုတိုပေနော် တားတား တိတွားသလိုဘဲ သိပ်တော့မသေချာဘူး
အဲဒါ ဧည့်သည် နဲ့ အိမ်ရှင် မဟုတ်လောက် ဖူး။
သမီးယောက္ဖ ဒါမှမဟုတ် သမီးယောက္ခမ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အော် …… ဦးပေ အခိုင်မန်းလေးလာမယ်မှာဆိုတော့ သူ့အိမ်ကိုလာလည်မှာစိုးလို့ ကြိုကန်ထားတာဖြစ်မယ်
အဲဒီဧည့်သည်ကလည်း တော်တော်တုံးတာ သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်နေ ကိုယ်ကဧည်သည့်ပဲ နေချင်သလိုနေလိုက် ပြန်သွားရင် သူကကိုယ့်အတင်းပြောကျန်ခဲ့မှာ ဂရုစိုက်စရာကိုမလိုဘူး ……. အဲသလို …… အဲသလို
ကိုပေ .. ဧည့်သည်ကလည်း .. မသိတတ်လိုက်တာ …
လက်ချည်းသွားတာကိုး …….. ဘယ်အမြင်ကြည်ပါ့မလဲ …..
အထုတ်နဲ့ အထည်နဲ့ သွားလျှင် ထမင်းလည်းကျွေးမယ် ..နင်းလည်း ပေးလိုက်ဦးမယ်တဲ့ … အဟီး ဟီး
ဥဥလေး အထုတ်နဲ့ အထည်နဲ့ လာခဲ့မယ်နော် ဟိဟိ
(မမှီမှာ စိုးလို့ ပြေးလာရတာ မောတာအေ)
ဟွန်းးးး ဘာမှန်းလည်း သိပူး…။ လူဇိုးးးးး ဒီက ဂဏန်းသုံးလုံးတွေ့လို့ အမောတကော လာလိုက်ရတာ ….။ သူ ဂ …………..
ဦးပေ အုန်းပဲ စားဗျာ…ကျန်တာတွေတော့ မစားနဲ့၊
ကိုယ့်ဖာသာကိုစားနေရာကနေ သူများတွေပါ အစားခိုင်းတယ်။..
ဆိုလိုချင်တဲ့ အချက်က…ဘာပါလ်ိမ့်လို့ ..တော့….စဉ်းစားမရဘူး.။
ဘာပဲ.ပြောပြော ဦးပေ..ရဲ့ ကွမ်းပို့ စ်တွေ..ဆို..သားက ဖတ်ပြီးသားပဲ..ထာထား…
192 ဆိုတာ ဒီပို့ စ်မှာပါတဲ့ word count ပါ ခင်ဗျ
ကျုပ်နဲ့ အတူတူ အုန်းစားသွားကြပါသော
ko khin kha ၊ mamanoyar ၊ Wow ၊ နွေဦး ၊ mayjuly ၊ ဘဲဥ ၊ laypai ၊ ကိုရင်မောင် ၊ Khaing Khaing ၊ etone ၊ aye.kk ၊ နေ၀န်းနီ ၊ ဇောက် ထိုး ၊ အလင်းဆက် …..
အားလုံးကို လေးစားကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
အင်း ဆရာပေ၏ အိမ်ရှင်နှင့် ဧည့်သည်ဇာတ်လမ်းမှာ ခေတ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနေပေသည်။
၂၀၀ မပြည့် လို့ အိမ်ရှင်က နှင်ထုတ်တာ။
၈လုံး လို လို့ နာမည်ပြောင်းလိုက်။
လူကျွံတယ် ဆိုပြီး ၀ီစီမှုတ်တယ် …. ခုလည်း အုန်းစားခိုင်းပြန်တယ် ..
အရီးလတ်တို့ ဖော်ပေလို့ .. မနေ့ကတည်းက ဖတ်ပြီး အုန်းစားနေတာ …အူးပေ. လူဇိုး … :grin: :grin:
ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တော့.. သူများအိမ်သွားရင်.. အိမ်ရှင်က.. ကျုးကျော်ဝင်လာတယ်ယူဆပြီးရင်ကို.. သေနတ်နဲ့နေရာတင်ပစ်သတ်လို့ရသဗျ..
ရဲ..အစိုးရ၀န်ထမ်းလည်း.. ၀ရမ်းမပါပဲ.. ကျူးကျော်ဝင်ခွင့်မရှိပါဘူး..
Indiana House Approves Bill That Allows Homeowners To Kill Police …
Mar 2, 2012 – The Founding Fathers Versus The Christian Right: Quotes In Support Of The … passed Senate Bill 1, which allows homeowners to shoot and kill police officers they … This bill takes home defense to an entirely new level. … in check, and such beliefs are going to result in more dead civilians and dead police.
၁၉၂ ကိုအုန်းစားတာ အခုမှပဲသဘောပေါက်တယ်။ ပထမစည်းကမ်းအရဆိုရင် ၁၀၈ လုံးလိုတာပေါ့။
ဘာမှန်းမသိ… ခု ပြန်လာဖတ်မှဘဲ
အော်…. နောက်ကျမှ ၀င်ဖတ်တော့ ၁၉၂ ကို အုန်းမစားရတော့ဘူးပေါ့။
ဧည့်သည် အိမ်ရှင်လို့ပြောတော့ လူအားလုံးကို ခြုံပြီး ပြောရရင် အားလုံးက လောကကြီးထဲကို ခဏတဖြုတ်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေပါပဲ။ အချိန်တန်ရင် နှုတ်ဆက်ရမဲ့ သူတွေ ချည်းပဲ။
နှုတ်မဆက်ခင် ခဏတဖြုတ်နေခွင့်ရခိုက်မှာ အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုး မလုပ်ပဲ အားလုံးနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ရှိအောင် နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ကိုယ်ပြန်သွားရင် တစုံတရာကျန်ရစ်အောင် တသသနဲ့ အမှတ်တရဖြစ်နေအောင် လူသာသေပြီး နာမည်မသေပဲ ချန်ရစ် ထားခဲ့နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
အခုလို တရားသဘောလေးနဲ့ ကွန်မင့်ပေးတဲ့အတွက်
စကားမစပ် ၊ ကျုပ် ပြောထားတဲ့ ပို့ စ်လေးလဲ တင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ အုန်းလို့ … ဟီဟိ
ကပေရယ်.. body fitting ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းက ငါတို့လို ပေါင် ၂၀၀ ရှိတဲ့သူက ဘယ်နှယ့် ရေးတတ်ပါ့မလဲ။ နင့်မိန်းမလို မော်ဒယ်ကိုယ်လုံးတွေမှ သိမှာပေါ့ ဟဲ့ ။
ဘယ်နှစ်ခါ ပြောရမလဲ.. စိတ်ဆိုးလာပြီနော်
လိုလိုနဲ့သာ ပြန်သွားပါ၏။ ;)
မနေ့က ထပ်ကာ ထပ်ကာ ဖတ်ပေမယ့် သိဝူးးး အရီးပြောမှပဲ သိတော့တယ် … ဟီးးး
ဟုတ်တယ်အေ။ အဲလိုအိမ်မျိုးဆိုနောက်ဘယ်တော့မှမလည်တော့ဘူး။ အခုလဲမလည်တော့ဘူး။ ပြန်ပြီအေ။ ကိုယ်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အဆင့်ခွဲတာလိုလို စော်ကားတာလိုလိုမျိုးတော့ဘယ်သူခံမှာလဲနော့်။